Impazamo imeko yeNtlawulo ye-IRS ayifumaneki: Ithetha Ntoni Ngokwenene? | XperimentalHamid
Impazamo imeko yeNtlawulo ye-IRS ayifumaneki: Ithetha Ntoni Ngokwenyani loo nto?
January 6, 2021 by USasha Gohar
Ubhubhane weCovid-19 wenze umonakalo kuqoqosho lwehlabathi. Iziphumo zoku kuphazamiseka kunjalo, zibonakala ngakumbi ngaphakathi kwamazwe. Ukuqinisekisa abantu abachaphazelekayo koku, urhulumente uze neepakeji zokukhuthaza.
Ezi phakheji ziye zanciphisa abantu abaninzi abasigidi kwihlabathi liphela. Ulawulo lukaTrump luye lwabonelela nge-2 yeetriliyoni zovuselelo lwezoqoqosho. Oku kuye kwanceda abantu abaninzi.
Ngaphandle kokunikezela ngoncedo kumashishini asokolayo, le phakheji yoncedo yenze ukuba ubomi bunyamezeleke kubantu abathile babucala. Urhulumente ubonelele abagcini-rhafu ngoncedo oluthile ngohlobo lwetshekhi yoNcedo lweCovid.
Ngaba imeko yeNtlawulo ye-IRS ayifumaneki?
Kutheni ndisafumana 'imeko yokuhlawula ingafumaneki?
Umyalezo wemposiso kwi-IRS yokukhuthaza ukujonga kwakhona ukufundeka:
Izisombululo Ukuba uqhubeka nokujonga umyalezo wempazamo ye-IRS Stimulus:
Kwinqaku kwi-LA Times enye intatheli yabhala:
Oku kwenziwe ngeIRS.org -isango likarhulumente. Nangona kunjalo, abanye abantu banobunzima ekusebenziseni eli ziko. Ngenxa yoku, bebebethela iintloko kudonga ngalunye abahlangana nalo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuphela ngabantu abenza iifayile zerhafu abafanelekileyo kule ngxowa-mali. Ukuba kunokwenzeka ukuba uphoswe kukugcwalisa ulwazi lwakho lwerhafu, ngekhe ube nakho ukufumana le ngxowa mali. Ingxowa-mali yoncedo inokubaluleka kuwe njengoko ikunika itshekhi ye- $ 1200.
Nanini na xa uzama ukusebenzisa i-IRS. Org iwebhusayithi ifumene impazamo njenge- "Isimo sentlawulo asifumaneki". Kuthetha ntoni oko?
Uninzi lwenu lusenokuba lundwendwele icandelo le-FAQ kule webhusayithi. Akukho nto apho, nangona kunjalo. Ayikuxeleli nokuba lempazamo isigxina okanye kungenjalo.
"Asikwazi ukunika imeko yentlawulo yakho okwangoku kuba asikabinalo ulwazi olwaneleyo (sisebenza koku), okanye awufanelanga kufumana ntlawulo,"
Ngamanye amaxesha sididekile entlokweni yethu kangangokuba siphoswe sisisombululo esingqalileyo. Isisombululo sinokulala kubuchwephesha.
Xa sizibhalisela isibonelelo, siyacelwa ukuba sigcwalise ifom. Abantu abaninzi abakwazi ukugcwalisa ifom ngokufanelekileyo. Kuyahlekisa ukubonisa ukuba asizukuyizalisa ngokuchanekileyo.
Apha unokufunda elinye inqaku Isikhokelo esigqibeleleyo kwiintlawulo zee-IRS Stimulus zee-non-fayile
“Abantu abaninzi, kubandakanya nale ntatheli, bafumanise ukuba ukufaka iidilesi zabo zesitalato ngoonobumba abakhulu kuyeyona nto iphambili ekungeneni nasekubekeni bafake ulwazi lweakhawunti yabo yebhanki ukuze imali yabo yokukhuthaza ifakwe kwikhompyutha endaweni yokulinda itsheki imeyile, ”
Ukushwankathela, into ayithethileyo, kuya kufuneka ugcwalise ifom yakho usebenzisa zonke ii-cap. Umzekelo, ukuba igama lakho ngu 'Smith' libhale njengo 'SMITH'. Ngaba ayilulungisi lula?
I-IRS ifumana impazamo yam yentlawulo ngaphandle kwamathandabuzo kukukhathazeka kodwa usebenzisa ulungiso olungentla, ungafumana kuyo. Kwelinye icala, ukuba oku kwehla jika kuwe uzama ukunxibelelana nabantu abajongene nokuhlawulwa kwemali.
Ngokwenza njalo ungaqinisekisa ukuba isikhalazo sakho sifikile kubantu abachaphazelekayo. Mhlawumbi banokukunceda ngcono!
Iphakheji yokuvuselela i-2 yezigidi zezigidi zeerandi ibe sisithixo kubantu abaninzi baseMelika. Oku kunokubanceda bagcine ubomi babo kunye namashishini abo. Ukuba bayayibona imeko yeNtlawulo engafumanekiyo engathethi ukuba abayifumani imali.
Ngomonde omncinci kunye nengqondo evulekileyo, banokuyiphepha le ngxaki. Ukulungiswa endikuthethileyo apha ngasentla kubonakala kuluncedo kuninzi.
Ukuba unethamsanqa-kwaye uyifayile irhafu-uya kuba nakho ukufumana iziphumo ezifunwayo.
iindidi iindaba, Tech tags Umyalezo wemposiso kuhlolo lwe-IRS olukhuthazayo, Imeko yokuhlawula ayifumaneki Post yokukhangela
Isahluko se-2515 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online
Isahluko se-2516 seNdodana emangalisayo kwi-Law Novel Free Online